Transformer mitokana: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao | Fitaovana maimaim-poana
Isaac | 26/10/2021 08:39 | Nohavaozina amin'ny 29/09/2021 12:54 | Fitaovana elektronika
Anisan'ireo singa elektronika nodinihina ihany koa ny mpanolo endrika, ho fanampin'izany dia efa niatrika ity karazana singa ity ihany koa izahay rehefa miresaka momba ny famatsiana herinaratra, ny karazana ankehitriny, sns. Ankehitriny dia anjaran'ny karazana transformer hafa tena miavaka, toy ny fitokana-monina transformer.
Azonao atao fantaro hoe inona izany, inona izany, ny fahasamihafana amin'ny karazana transformer hafa, ary koa ny fomba hifidianana ny iray amin'izy ireo ho an'ny tetikasanao ho avy.
1 Inona no atao hoe transformer isolation?
1.2 Tombontsoa amin'ny transformer mitoka-monina
1.3 Fampiharana transformer fiarovana
2 Aiza no hividianana transformer mitokana
Inona no atao hoe transformer isolation?
ny transformer elektrika Izy ireo dia manana ny fananana ny famindrana angovo eo amin'ny roa na mihoatra ny conducteur windings tsy misy fifandraisana ara-batana eo amin'izy ireo. Ny hany tokana dia ny auto-transformers. Mba hamokarana an'io famindrana io dia mifototra amin'ny induction electromagnetika izy ireo, ary amin'ny ankapobeny dia misy fihodinana maromaro kokoa na latsaka no ampiasaina amin'ny fihodin'izy ireo hanova ny volt.
Misaotra an'izay fitokana-monina eo amin'ny faritraKoa satria ny iray dia mifandray amin'ny fihodinana voalohany ary ny iray amin'ny fihodinana faharoa, tsy vitan'ny hoe azo ovaina ny famantarana, fa afaka miasa ho toy ny singa fiarovana ihany koa.
Raha ny marina, rehefa miresaka momba ny mpanova fiarovana na mpanova mitokana isika, dia miresaka amin'ny transformer manokana 1: 1 taha, izany hoe, miaraka amin'ny fihodinkodinana mitovy amin'ny coils roa (mitovy ny isan'ny fihodinana), ka tsy manova ny volt. Ny vokatrao dia hitovy amin'ny fidiranao.
Noho izany antony izany dia ampiasaina amin'ny fampiharana fiarovana, rehefa mila mampita angovo elektrônika avy amin'ny faritra iray mankany amin'ny iray hafa ianao ary te-hanaisotra ny roa.
Ao anatin'ireo transformer fiarovana, na fitokana-monina, dia afaka mahita karazana fototra roa:
Dingana tokana: misy écran napetraka eo anelanelan'ny fihodinkodinana voalohany sy faharoa, izay mifamatotra amin'ny fiantsonana mitokana. Ankoatr'izay, ny brackets dia voasarona avy amin'ny fototry ny transformer. Ireo ihany koa dia manana sensor mari-pana ao anatiny, ary manana haavon'ny tabataba ambany. Mampiasa dingana sy tsy miandany izy io, ary miaraka amin'ny voltase fampidirana 220V na 230V amin'ny ankapobeny.
Triphasic: manana rafitra mitovy amin'ny dingana tokana ihany koa izy io, fa amin'ity tranga ity ho an'ny fametrahana dingana telo. Izany hoe, ny dingana tokana dia mahazatra amin'ny fampiharana an-trano, raha ny fametrahana dingana telo kosa dia hita amin'ny ankapobeny amin'ny fametrahana indostrialy na ara-barotra. Ireo fametrahana ireo dia tsy manana afa-tsy dingana iray sy tariby tsy mitongilana iray, fa mizara ho tondra-drano na dingana telo mifandimby mba hizarana ny herin'ny fametrahana. Amin'ity tranga ity, matetika izy ireo dia manohana 380 na 480V.
Tombontsoa amin'ny transformer mitoka-monina
Ny fananana transformer mitoka-monina dia mety manana andiana tombony ho an'ny fametrahana elektrika, toy ny:
Tena ilaina izy ireo mba hiarovana amin'ny herin'ny herinaratra, ohatra, mba hiarovana amin'ny taitra elektrika.
Izy ireo dia miantoka ny fisian'ny famatsiana herinaratra miaro ny fametrahana. Izy ireo dia mety tsara ho an'ny fametrahana avo lenta.
Ny fatiantoka dia ambany noho ny an'ny karazana transformer hafa.
Izy ireo dia novolavolaina sy novokarina tamin'ny sosona insulation nanamafy, izay manome tanjaka sy fiarovana bebe kokoa.
Fampiharana transformer fiarovana
Raha manontany tena momba ny fampiharana an'ity karazana ity ianao fitokana-monina na fiarovana transformer, dia hita ao amin'ny fametrahana sy fitaovana elektrika marobe. Ohatra:
Mba hiarovana ny mpiasa amin'ny fahatapahan-jiro. Na ao amin'ny trano indostrialy sy ao amin'ny trano sivily mampiasa dingana telo sy tokana.
Amin'ny loharanom-pahefana sasany ho an'ny fitaovana saro-pady.
Masinina efitrano fandidiana marefo.
Fitaovana laboratoara sy fitaovana famatsiana herinaratra sasany ho an'ny atrikasa elektronika.
Amin'ny maha-sivana tabataba elektrika, manasaraka ny fidirana amin'ny vokatra.
Ny marina dia ny safidy dia tena isan-karazany.
Aiza no hividianana transformer mitokana
Raha mitady isolation transformer amin'ny vidiny tsara, manana safidy samihafa ianao, anisan'izany ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny mikaroka azy amin'ny sehatra fivarotana Amazon. Ohatra, ireto misy soso-kevitra vitsivitsy:
Akozon transformer manokana ho an'ny fampiharana feo. Misy ampahany 10, ary 1: 1 izy ireo.
ZCX mitokana transformer 1: 1, miaraka amin'ny 220v input sy 220v output. Manohana hatramin'ny 10W.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fitaovana elektronika » Isolation transformer: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao